Ambohipanja Sabotsy Namehana: am-perinasa ny tobin-drano mamatsy fokontany maro - ewa.mg
News - Ambohipanja Sabotsy Namehana: am-perinasa ny tobin-drano mamatsy fokontany maro
Efa am-perinasa ny tobin-drano eny
Ambohipanja Sabotsy Namehana, notsidihin’ny minisitra
Rakotovelomanantsoa Voahary, ny talata teo. Mamokatra rano 100 m3
isan’ora ny tobin-drano ka rano efa voadio, azo antoka tsara no
mivoaka tsinjaraina amin’ny mpanjifa.
Manaraka ny fenitra
iraisam-pirenena ireo fitaovana ampiasaina hanadiovana ny rano eny
amin’ny toby. Misitraka rano madio fisotro ankehitriny ny kaominina
Namehana sy Anosy Avaratra noho ny fisian’io tobin-drano vaovao
Mandeha ny paompy eny amin’ny
fokontany araka ny porofo nentin’ireo lehiben’ny fokontany tonga
teny an-toerana. Misy ireo toerana nijaly rano nandritra ny taona
maro ary efa mandeha kosa izany tao anatin’ny roa andro izao.
“Mbola misy ny fanatsarana hatao
amin’ny famokarana rano eto Antananarivo toy ny fametrahana ny
fantsona sasany”, hoy ny minisitra Rakotovelomanantsoa Voahary ka
tsy maintsy hovitaina avokoa izany.
Hijery ny fizotran’ny asa eny
amin’ny toby famatsian-drano eny amin’ny distrikan’Ambohidratrimo
indray ny ekipan’ny minisiteran’ny Rano sy ny Jirama aoriana
L’article Ambohipanja Sabotsy Namehana: am-perinasa ny tobin-drano mamatsy fokontany maro a été récupéré chez Newsmada.
JOSEPH RANDRIAMAMPIONONA (DADAFARA) : Mifanohitra amin’ny sary niparitaka ny fanapaha-keviny
Nisafidy ny hanohana ny kandida Andry Rajoelina i Joseph Martin Randriamampionona na i dadafara. Raha toa ka niparitaka tany amin’ny tambazotran-tserasera “facebook” ny sariny niresaka tamin’i Marc Ravalomanana dia mifanohitra amin’izany ny zava-mitranga. Nanao fanambarana ny birao nasionaly ny antoko “refondation totale de Madagascar” (RTM) izay tarihiny androany 3 desambra 2018. “ Samy nihaona tamin’ireo kandida roa hifaninana amin’ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa ny tenako. Nifanakalo hevitra tamin’i Andry Rajoelina nandritra ora roa aho ary tsapako fa olona mahay mihaino izy”, hoy i dadafara. Nilaza ihany koa izy fa nifanakalo hevitra tamin’ny kandida Marc Ravalomanana teny amin’ny QG-ny saingy roa minitra monja ny faharetany ny resaka ary tsy mbola nisy ny fanapaha-kevitra hanohana ity kandida ity dia efa niparitaka tao amin’ny “facebook” ny sary. Tapaky ny birao nasionaly ny RTM fa ny kandida Andry Rajoelina no hotohanan’ny antoko. Nanamafy i dadafara nametraka fepetra tamin’i Andry Rajoelina. Ao anatin’izany ny fitanana ny teny nomena sy ny fisian’ny asa mivaingana. “Hiara-hiasa akaiky izahay rehefa tonga eo amin’ny fitondrana ary hanolo-tsaina azy aho”, hoy i dadafara. Lynda A. Cet article JOSEPH RANDRIAMAMPIONONA (DADAFARA) : Mifanohitra amin’ny sary niparitaka ny fanapaha-keviny est apparu en premier sur déliremadagascar.
News - Tia Tanindrazana
Ravalomanana sy ny ekipany “Atsaharo ny faneriterena sy fampitahorana”
Namoaka fanambarana ny eo anivon’ny fandrindrana ankapobeny ny fampielezan-kevitry ny kandida laharana faha-25 Marc Ravalomanana, izay tarihin’Atoa Serge Zafimahova omaly eo anatrehan’ny toe-draharaham-pirenena amin’izao. Efa nanome baiko nisintonana ireo fitoriana 208 noheverina hapetraka teny anivon’ny Fitsarana Avo momba ny lalàmpanorenana mahakasika ny fifidianana ho filoham-pirenena ny kandida Marc Ravalomanana na dia mitombina sy mipetrapetraka aza izany. Anisan’ny tao anatin’ny fitoriana ny fangatahana fanintsanana kandida iray raha ny nambaran’ny mpisolovava Hasina Andriamadison tamin’ny onjam-peon’ny Top Radio 102.8FM omaly antoandro, izay mety tsy hitondra filaminana raha tanteraka, fa tsara kokoa ny hirosoana amin’ny dingana manaraka amin’ny fifidianana ara-demokratika. Noho ny traikefa ananany sy amin’ny maha olom-panjakana an’i Marc Ravalomanana no antony, izay fanapahan-kevitra mifototra amin’ny fahavononany hikatsaka lalandava fitoniana hiatrehana izao savorovo politika iainantsika izao, hoy ny fanambarana. Mandala ny tontolo milamina sy tony amin’ny fitohizan’ny lamim-pifidianana sy ny fanatanterahana ny fifidianana fihodinana faharoa izay tokony hatao ny 19 desambra izao. Tsy arakakaraky ny fahavononana sy finiavana asehon’ny kandida Marc Ravalomanana mba tsy hisian’ny romoromo anefa ny zava-misy, ka malahelo ny tenany mikasika ny nanjo ireo olona izay mieritreritra na efa manohana azy. Ohatra iray mivaingana azo raisina ny faneriterena sy ny fampitahorana mahazo ny tompon’andraikitra ao anatin’ny orinasa RLM Communication. Manao antso avo mba hanatsaharana haingana izany manoloana ny savorovo politika efa tsinjo izao, hoy ny hafatra. Ho fanajana ny olom-pirenena sy ny safidiny ihany koa, dia miangavy ny rehetra mba hiaraka hametraka ny tena adihevitra milamina amin’ny fitandrovana ny demokrasia eto amin’ny firenena ny kandida Marc Ravalomanana sy ny mpiara-dia aminy. Manao antso avo ho an’ny fitondram-panjakana foibe (Filohan’ny Repoblika mpisolo toerana sy ny governemanta foibe) mba hitandro lalandava ny tsy fiandaniana ary mba hampijanona ireo fombafomba rehetra sy ireo fihantsiana ara-politika amin’ny endriny samihafa ary koa ny fampitahorana isan-karazany atao amin’ireo mpiasa izay manatanteraka ny asany. Niaraha-naheno ny voka-pfidianana tsy ofisialy navoakan’ny CENI mahakasika ny fihodinana voalohany ka mangataka fitoniana sy filaminana izahay eto am-piandrasana ny fanapahan-kevitry ny HCC, ary manao antso avo ho an’ny olom-pirenena rehetra mba hanao toy izany, hoy hatrany ny fanambarana. Toky R Cet article a été récupéré chez https://www.tiatanindrazana.com/pages/modules.php?id=34823
Karaman’ny Pat tara enim-bolana: midi-trosa mihitsy ireo oniversite handoavana azy
Mikasika ny fitakiana ny karaman’ny mpiasan’ny oniversite saika manerana ny Nosy, nitondra fanazavana, omaly, ny minisitry ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika, i Assoumacou Elia Béatrice. Nambarany tamin’izany fa misy ireo oniversite voatery nidi-trosa tamin’ny banky aloha entina hanatrarana izany karama izany. Tara enim-bolana ny karaman’ny mpiasan’ny oniversite. Ma­ma­ha izany tsikelikely ny minisitera tompon’andraikitra. Efa nihena roa volana sy iray volana sisa izany ho an’ny oniversite sasany. Nihaona amin’ny sendikà nasionalin’ny Pat na ny ekipa teknika eny amin’ny oniversite ny minisitra nijery ny vahaolana. Nohazavaina tamin’izy ireo ny zava-misy mikasika ny kamarany sy ny dingana efa natao sy ny vahaolana naroso. Voadinika ny resaka “in­demnité de technicité” izay nisy fotoana tapaka izany satria tsy misy lalàna mamaritra sy manamarina ny tokony hisitrahana izany araka ny voalazan’ny ao amin’ny minisiteran’ny Vola. Efa miaraka mijery vahaolana ny telo tonta amin’izao fotoana izao. Ho an’ny karama, ireo oniversite efa nahavita sy nahatonga ny lisitra madio sy mangarahara, efa nisy nivoaka ny karama toy ny any Fianarantsoa sy any Ma­hajanga, efa nivoaka ny taratasim-bola. Ny hafa efa nandefa ny taratasy voamarina ka eo am-pamahana izany indrindra ny minisitera amin’izao fotoana izao.Tatiana AL’article Karaman’ny Pat tara enim-bolana: midi-trosa mihitsy ireo oniversite handoavana azy a été récupéré chez Newsmada.
Mila malina na marina aza…
Tsy kely lalana ny ratsy? Mila malina hatrany amin’izao fiverenana miandalana amin’ny fiainana andavanandro izao. Nahoana? Tsy mbola vita tanteraka ny ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19. Tsy mandreraka ny mamerin-dresaka, tsy mahasosotra, tsy mankaleo. Tsy hita maso ny fahavalo, tsy ampoizina, tsy mifidy olona… Mila malina na marina amin’ny atao aza ny tena. Miditra amin’ny vanim-potoana ririnina rahateo izao, tsy fantatra be ihany izay mety ho fiovan’ny valanaretina.Tsy vitan’izay, ilaina ny fahamatorana sy ny fitoniana amin’izay mitranga sy atao. Tao anatin’ny nahamafy sy nahasarotra ny ady aza, vitan’ny sasany ny manararaotra amin’ny fahasahiranana sy fahavoazan’ny hafa: tsy ahoany, ohatra, izay fielezan’ny aretina sy ny voka-dratsiny, tsy omen-danja ny fiarahamonina sy ny fifampitsinjovana. Ny tombontsoa manokana ihany no mahamaika? Sanatria, misy tonga amin’ny firarian-doza haharitra mba hahazoan-tombony manokana aza.Eo ny fitiavan-tena sy fitiavan-kely, fa tsy mahafa-bela ny sasany koa ny kajikajy sy paipaika politika. Izany no fototra sy fositra amin’ny fampielezana vaovao tsy marina? Na fanaratsiana izay mitranga rehetra, fanakiviana, fankahalana, fanakorontanana… Iandrasana kendry tohina hatramin’ny trangan-javatra heverina ho tsy inona na tsy ampoizina. Toy ny tsimokaretina ihany? Saingy takona sy mamely ambadika, mamitaka amin’izay tsy mahatombina, manao ho tohatra fiakarana…Izay no itandremana, mila malina ny tena na marina aza. Mety ho ratsy lavitra no ho ny voka-dratsin’ny areti-mandoza no afitsoky ny mpiandry kendry tohina, raha tsy mahamailo? Tsy hoe fahavalo avy any ivelany tsinona, fa ny samy eto ihany no miady na ampiadiana an-toerana. Mampieritreritra ny karazana fanakorontanana etsy sy eroa. Amin’izany, ny vahoaka mandrakariva no ialokalofana noho ny fahasahiranana, andranitana fankahalana mpitondra, handeha amin’ny fanoherana befahatany…Rafaly Nd. L’article Mila malina na marina aza… a été récupéré chez Newsmada.